Mandritra ny fitondrana vohoka, ny vehivavy dia manome fitsapana maro, ary ny tena matetika amin'izy ireo dia urinalysis. Noho izany dia mitombo ny enta-mavesatra amin'ny voa sy ny fo rehefa mitondra ny zaza. Noho izany, mba hanaraha-maso ny toe-javatra misy an'ireo rafitra roa ireo, alohan'ny fitsidihana rehetra amin'ny dokotera, ny vehivavy dia tokony haka marary mba hanaovana fanadihadiana.
Ny fitsirihana urine lehibe natao nandritra ny fitondrana vohoka dia fanandramana pipa ankapobeny. Ny fanasitranana ny vehivavy bevohoka ihany no tokony ho voaangona, ary ny fanadihadiana dia voafaritra tsara.
Indeksan'ny urinalysis mandritra ny fitondrana vohoka
Ny fampitoviana lehibe amin'ny urinalysis mandritra ny fitondrana vohoka dia:
Color . Amin'ny ankapobeny, ny lokon'ny urine dia mavo-mololo. Ny loko mafimafy kokoa dia manondro ny fahaverezan'ny vatana.
Transparency . Mety handreraka ny urine satria misy sela mena, leukocytes, bakteria, ary epithelium.
рН of urine . Ny lanjany dia heverina ho 5.0. Ny fitomboan'ny marika mihoatra ny 7 dia mety hanondro ny hyperkalemia, ny tsy fahombiazana amin'ny tsy fahampian-tsakafo, ny aretin'ny atidoha ary ny aretina hafa. Ny fihenan'ny pH hatramin'ny 4 dia mety ho famantarana ny tsy fahampian-tsakafo, diabeta, tuberkuleza, hypokalemia.
Leukocytes . Ny fitsipiky ny leukocytes amin'ny fandalinana ny urine mandritra ny fitondrana vohoka dia mihoatra ny 6. Ny fandaniana io mari-pana io dia manondro ny areti-mifindra amin'ny bala, ny voa na ny urethra.
Protein . Ny fikarohana ara-dalàna momba ny urine mandritra ny fitondrana vohoka dia tsy mihevitra ny fisian'ny proteinina ao aminy. Ny votoatiny dia 0.033 g / l (0,14 g / l - ao amin'ny laboratoire moderne). Ny fitomboan'ny votoatin'ny proteinina dia afaka miresaka momba ny adin-tsaina, ny herim-po mahery vaika, ny pyelonephritis, ny gestosis, proteinuria ny vehivavy bevohoka.
Ketone bodies . Ireo akora misy poizina ireo dia hita ao amin'ny fanadihadiana ankapobeny momba ny urine amin'ny vehivavy bevohoka miaraka amin'ny tosidrany mafy ao amin'ny tapany voalohany amin'ny fitondrana vohoka na amin'ny fihanaky ny diabeta amin'ny reny hoavy.
Density relatif . Mihabetsaka izany fitomboana izany amin'ny fisian'ny proteinina sy glucose amin'ny urine, amin'ny toxikose sy ny fahaverezan'ny rano. Ny fihenan'ny tsipika dia miseho miaraka amin'ny fisotroana be loatra, fahasimbana amin'ny fihenan-taolana, ny tsy fahampian-tsakafo.
Glucose . Ny fisehoan'ny siramamy amin'ny fitrandrahana kely amin'ny antsasany faharoa amin'ny vohoka dia tsy manan-danja. Rehefa afaka izany rehetra izany dia manatsara ny haavon'ny siramamy ny taovam-pananahana, mba hahazoan'ny ankizy bebe kokoa. Ny glucose avo lenta dia famantarana ny diabeta.
Bakteria . Ny fisian'ny bakteria ao amin'ny urine miaraka amin'ny marary leukocytes dia marika ny aretin'ny voa, na cystitis. Ny fanandramana ny bakteria ao anaty urine miaraka amin'ny habetsahan'ny fototarazaka fotsy dia mampiseho ny fisian'ny atidoha. Ankoatra ny bakteria, ny holatra toy ny holatra dia azo tsapaina amin'ny urine.
Indraindray ny manombantombana ny asan'ny voa mandritra ny fitondrana vohoka, ny nomena ny pipisy isan'andro dia omena. Miaraka amin'ny fanampiany, dia voafaritra ny habetsahan'ny urine atolotra ao anatin'ny 24 ora. Ny valin'ny fitsapana nandritra ny 24 ora nandritra ny fitondrana vohoka dia ahafahana mamaritra ny habetsaky ny crèmeinine voasivana amin'ny voa, ny fatiantoka isan'andro amin'ny mineraly sy ny proteinina.
Ny hematoma miverimberina amin'ny fitondrana vohoka - vokany
16 herinandro ny bevohoka - inona no mitranga?
Famaritana ny atody
Fitsapana ho an'ny ovulation amin'ny fitondrana vohoka
Ny vehivavy bevohoka - amin'ny daty inona no ripaka ny rambony?
Bevohoka roa isan-kerinandro
Ny foetus BDP isan-kerinandro
Tena ilaina ny dite
Sary mivantana ho an'ny zazavavy
Mpandray anjara tsy nandray Oscar
Inona no atao hoe vaksiniana?
Rihanna dia miarahaba ny Mpanjakavavy Elizabeta II amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany
Ny tsilo miloko - ny toetra mahasoa sy ny fanoherana
Fitsaboana gripana sy fitsaboana
Rose Cordana - fikarakarana
Models of sweatshirts
Ahoana no hampihenana ny fiankinanao amin'ny fahaverezanao?
Ahoana ny fanasana kitapo?